Vaovao - Ahoana ny fisafidianana ireo fitaovana azo ampiasaina amin'ny laboratoara PCR (2)
Hmila misafidy ireo entana azo ampiasaina amin'ny laboratoara PCR (2)
Ny fihanaky ny valanaretina vaovao amin'ny satro-boninahitra any amin'ny faritra sasany dia nanjary raharahan'ny rehetra. Ny fahitana ny coronavirus vaovao dia mampiasa ny fomba PCR miisa fluorescent ankehitriny ary ny ora famaranana ny tatitra fitiliana asidra nukôlika dia mitaky 4 ka hatramin'ny 5 ora. Ny asidra nuklealy viraly dia tsy azo ampiasaina raha tsy aorian'ny fitrandrahana. Alohan'ny hanaovana fitsapana fitaovana dia ilaina ny mamaky ny asa fananganana rafitra alohan'ny hametrahana ilay fanandramana PCR amin'ny milina, ary avy eo afindra amin'ny masinina PCR hanombohana ny fanandramana PCR.
Mandritra ny fizotrany rehetra, toa tsy mora ny manampy ranoka ao amin'ny PCR, fa amin'ny dingana ankehitriny rehefa mitombo be ny habetsaky ny detection dia tena rohy miasa mafy kokoa izy io. Ireo mpampiasa pipetting dia matetika manana fiheverana betsaka rehefa misafidy fantsom-pandrefesana fandrefesana, fa rehefa misafidy fatra refy fandrefesana dia manome izy ireo’tandremo tsara izany. Ny tendrony fandrefesana pipette dia toy ny bala-basy fandrefesana, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny fahamarinan'ny pipetting, noho izany dia tsy very ny maha-zava-dehibe. fandrefesana basy pipette. Minono kely, anontanio ny oniversite, andao hiara-mianatra.
1 Inona avy ireo fampahalalana tokony ho fantatsika mba hividianana tendrony?
"Raha mbola ny tendrony azo apetraka dia ny tendrony azo ampiasaina" - izany dia saika ny fahalalan'ny mpampiasa rehetra ny fahaiza-mampifanaraka ny tendrony. Ity fanambarana ity dia azo lazaina ho marina ampahany nefa tsy marina tanteraka.
Ny tendrony azo apetaka amin'ny fantsom-pandrefesana fandrefesana dia afaka mamorona rafitra fantsom-pifaneraserana miaraka amin'ny fantsom-pandrefesana fandrefesana mba hahatsapana ny fiasan'ny pipetting, saingy azo antoka ve izany? Mila mari-panontaniana eto. Ny valiny an'ity fanontaniana ity dia mitaky angon-drakitra hiteny.
(1) Azonao atao ny manao fitsapana fampisehoana aorian'ny fampitahana ny refy fandrefesana amin'ny tendrony. Rehefa avy nanasa ny tendrony ianao dia manaova fandefasana santionany santionany miverimberina, lanjalanjao ny vola ampiana santionany isaky ny avy ary soraty ny vakiteny.
(2) Kajy ny marina sy ny marim-pototra amin'ny fiasan'ny pipetting aorian'ny fanovana azy ho lasa volume arakaraka ny hakitroky ny ranoka andrana.
(3) Ny zavatra tsy maintsy safidintsika dia ny tendron-tsoratra izay misy ny fahitsiny tsara sy mazava kokoa. Raha ny pipette fandrefesana fandrefesana sy ny pipette fandrefesana dia tsy mifanaraka amin'ny marina, dia midika izany fa ny fihenan'ny fantsom-pandrefesana fandrefesana sy ny fantsom-pandrefesana fandrefesana dia tsy azo antoka, ka tsy azo averina ny valin'ny asa tsirairay.
2 Inona avy ireo fampahalalana tokony ho fantatsika mba hividianana tendrony?
Ny tondro fampisehoana ny tendrony dia: adsorption ambany, singa sivana, tery, herin'ny fandefasana sy ny fivoahana, tsy misy DNase sy RNase, tsy misy pyrogen; Ireo tondro ireo dia azo alaina amin'ireto fampahalalana manaraka ireto.
01 Kalitaon'ny fitaovana Amin'izao fotoana izao, ny torohevitra suction eto an-tsena amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny plastika polypropylene (plastika tsy misy loko sy mangarahara miaraka amin'ny tsy fetezan'ny simika avo sy ny velaran'ny mari-pana malalaka). Ny torohevitra avo lenta dia mazàna vita amin'ny polypropylene voajanahary, raha toa kosa ny toro-hevitra mora vidy dia mety hampiasa plastika polypropylene voaverina. Ny tendrony nomen'i Huida dia vita tamin'ny akora polypropylene nafarana izay mahafeno ny fenitra USP Class-VI. Manana mangarahara avo izy, fanoherana ireo solvent solika, ary fanoherana hafanana marobe: -80℃~ 121℃, tsy misy fiovana aorian'ny mari-pana ambony sy ny fanerena avo lenta, akora avo lenta avo lenta Mitondra fahombiazana avo lenta!
Ho fanampin'izay, ny ankamaroan'ny torohevitra dia hanampy fanampiny kely mandritra ny fizotry ny famokarana. Ny mahazatra dia:
(1) fitaovana fampivelarana loko, ampiasaina amin'ny tendron'ny manga sy mavo;
(2) additives. Ampio ny tendron'ny tendrony hisaraka haingana amin'ny lasitra aorian'ny fananganana azy.
(3) Additives amin'ny fitsaboana ny tampon'ny tendron'ny basy ambany-adsorption.
02 Fandotoana biolojika
Mihabetsaka ny mpampiasa no mitaky ny toro-hevitra fa tsy misy RNase, tsy misy DNase, tsy misy ADN, tsy misy pyrogen ary tsy misy ATP. Na izany aza, ny torohevitra voadidy amin'ny hafanana avo lenta dia tsy afaka manome antoka tanteraka ny tsy fisian'ny fandotoana biolojika. Mba hahazoana antoka fa tsy misy fandotoana biolojika dia ilaina ny dingana toy ny fitsaboana gamma ray. Noho izany, saika tsy ho vita ho an'ny mpampiasa ny manary ny toro-hevitra mahazatra amin'ny toro-hevitra maloto tsy biolojika, ary ny toro-hevitra efajoro voaroaka tsy biolojika dia tsy maintsy manome mari-pankasitrahana mifanaraka amin'izany mba hanondroana ny angona fitsapana an'ireo entana mifanaraka amin'izany. Ireo torohevitra nomen'i Doheng dia novokarina tao amin'ny atrikasa tsy misy vovoka 100 000 kilasy mba hahazoana antoka fa tsy misy pyrogen, tsy misy DNase, ary tsy misy RNase ireo vokatra.
Sokajy sy tsipiriany 03Tips
Ho fanampin'ireo torohevitra mahazatra mahazatra indrindra, dia misy ihany koa ny toro-hevitra sivana, ny toro-hevitra ambany amin'ny adsorption, ny toro-hevitra momba ny toeram-piasana mandeha ho azy ary ny toro-hevitra amin'ny vava malalaka, izay mety amin'ny andrana samihafa. Ohatra, ny santionany fandrefesana fandrefesana pipett an'ny tendron'ny sivana dia tsy afaka miditra ao anatin'ny fantsom-pandrefesana fandrefesana, amin'izay dia miaro ny ampahany amin'ny refy fandrefesana amin'ny fandotoana sy ny harafesina. Ny tena zava-dehibe dia azo atao koa ny miantoka fa tsy hisy ny fandotoana ny lozam-pifamoivoizana eo amin'ny santionany.
Ny famaritana fonosana an'ny tendrony dia ao anaty kitapo sy boaty. Ny boaty dia voadio alohan'ny handaozany ny ozinina, ary afaka mampiasa azy mivantana ny mpampiasa; misy torohevitra 500 na 1000 atosika isan-kitapo, ary ny ankamaroan'ny mpampiasa dia hividy ireo toro-hevitra voafefy ary avy eo dia apetrany ao anaty boaty tendrony ireo torohevitra. Ny fonosana vita amin'ny boaty dia somary lafo, fa ny fonosana kitapo kosa dia mampitombo ny mety ho fandotoana mandritra ny fizotan'ny tanana ny boaty tendrony.
Huida dia manana toro-hevitra feno, na ao anaty kitapo na boaty. Famaritana pipetting: 10ul, 100ul, 200ul, 300ul, 1000ul, 1250ul; misy ihany koa ny torohevitra mahazatra, ny toro-làlana sivana ary ny toro-làlan'ny fitondran-tena mety amin'ny toeram-piasana. . Amin'ny maha mpamatsy fitaovana sy kojakoja ara-pitsaboana azy, Huida dia tsy vitan'ny manome vahaolana ho an'ny mpanjifa fotsiny ho an'ny fitaovana PCR sy ny fitaovana, ary miezaka ny ho azo ampiasaina amin'ny laboratoara PCR, afaka manome vokatra feno sy kalitao avo lenta sy serivisy mifandraika amin'izany izahay. Tongasoa eto handefasanao fanadihadiana momba ny antsipiriany bebe kokoa.